1dielectric နှင့်အတူ Ayer 1.125mm Alu ဘုတ်အဖွဲ့ immersive ငွေသတ္တု PCB နဲ့ LED တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့အယ်လ်အလွှာ (IMS) - dielectric နှင့်အတူတရုတ် 1ayer 1.125mm Alu ဘုတ်အဖွဲ့ immersivIMS��ွေသတ္တု PCB နဲ့ LED တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့အယ်လ်အလွှာ (IMS)ကုန်သွင်းသူ,စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » သတ္တုအခြေခံပြီး PCB(IMS)
1dielectric နှင့်အတူ Ayer 1.125mm Alu ဘုတ်အဖွဲ့ immersive ငွေသတ္တု PCB နဲ့ LED တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့အယ်လ်အလွှာ (IMS)
255*127မီလီမီတာ / 18pcs
1အလွှာ immersive Silver,
1 လူမီနီယမ် PCB ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့ Layer, ပစ္စည်းလူမီနီယမ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါသည်. 1.125မီလီမီတာ±0.1မီလီမီတာဘုတ်အဖွဲ့အထူ. အပူ conduction 2.0W / MK ဖြစ်ပါသည်, CTV>600, နှစ်မြှုပ်ခြင်းငွေက Surface ကုသမှု, အဖြူရောင်မှင်, Black ကဒဏ္ဍာရီ. သတ္တုအခြေပြု circuit board (IMS), IMS နည်းပညာအပူတွေအများကြီးသေးငယ်တဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိအဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, base ပန်းကန်လူမီနီယမ်, LED အလင်းရောင်နှင့်အာဏာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအဘို့ဥပမာသင့်လျော်သော, က system ကိုစွမ်းဆောင်ရည်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပိုအပူစွမ်းအင်ကိုငျ့သှားဖို့ရှိပါတယျဘယ်မှာ. IMS လူမီနီယမ်အများဆုံးအသုံးပြုသတ္တုအလွှာဖြစ်ပါသည်.
အနက်ရောင် coverlay နှင့်အတူတင်းကျပ်-Flex ကိုဘုတ်အဖွဲ့2countersunk အမြင့် Precision PCB နှင့်အတူအလွှာ ENIG 1oz PCB
2 အပြာ soldermask Quickturn PCB FR4 ပစ္စည်း ENIG 1u "Fast Delivery နှင့်အတူအလွှာ ENIG PCB
4 အလွှာ Multilayer PCB ထူထပ်သောရွှေကို PCB အမြင့်-TG PCB FR4 TG170 ENIG 3U "PCB IPC-A-600 အရည်အသွေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနျ Standard ul အတည်ပြုချက်ခဲ့သည် Rating 94V-0